Fifidianana sefom-pokontany hoe?
2007-05-21 @ 08:16 in Politika
Samy manana ny fanonona tiany avokoa moa ny mpitondra rehetra rehefa manondro asa iray izy ka mifampiankina amin’ny fampandehanana ny asam-panjakana izany. Asa inona angaha no tsy nitiavany ny teny hoe filoham-pokontany ? Naleony angamba natao hoe sefo ilay izy fa tiany ho azy irery ny anarana hoe filoha. Raha nahatadidy ny teto an-tanàna dia efa saiky nosoloany teny hoe kartie ihany koa io teny hoe fokontany io, tahaka ny efa nanariany ny teny hoe firaisampokontany sy ny fivondronampokontany izay ny jeneraly Ratsimandrava no nametraka ny teny voalohany.
Tsy any moa no tena idirana fa ny amin’ny fifidianana ity sefom-pokontany ity. Mahavariana amin’izy ity dia ny tsy fanatanterahana ny fifidianana azy amin’ny fotoana tokana. Samy manana ny androm-pifidianany ny distrika tsirairay, na kaominina tsirairay na fokontany tsirairay. Tsy misy fotoana raikitra fa dia araka izay mahavonona ny tompon’andraikitra any an-toerana angaha. Dia tahaka ny hoe samy manao izay tiany atao ny tsirairay. Fifidianana sahala amin’izao ve no hametrahana ny fototry ny fampandrosoana ?
Manaraka izany indray dia samy manana ny fomba fifidianany ihany koa ny fokontany tsirairay, na kaominina tsirairay, na distrika tsirairay. Ny iraisana dia tsy misy ny lisitra avy amin’ny minisiteran’ny atitany fa izay lisitra ao amin’ny fokontany ihany no hanatanterahana ny fifidianana. Ny teto Antananarivo moa dia ny karam-pokontany no niasa (tamin’ny taona 2003 na 2004 izy iny fa tsy mbola nifidy sefom-pokontany ny eto tamin’ity taona ity).
Tao anaty fivoriambem-pokonolona moa no nanatanterahana ny fifidianana ary silatsilaka taratasy no hanaovana ny safidy. Alohan’izany aloha dia asaina manolo-tena ny olona izay hirotsaka. Tsy misy mirotsaka amin’ny anaran’ny antoko fa amin’ny anaran’ny tenan’ny tsirairay avy ihany no hirotsahana. Rehefa izany dia omena laharana ireo olona ireo ary asaina milahatra eo anoloan’ny biraom-pifidianana. Mitazona baoritra misy ny laharany avokoa ny kandida tamin’izany fotoana izany. Tsy ny anaran’ilay olona no apetaka ao anaty taratasy fa ny laharana mipetaka eo amin’ny baoritra. Tsy nisy vata manokana ihany koa fa satroka (tsy mandainga aho na mivazivazy fa tena izany mihitsy tamin’ny taona nolazaiko teo io) no nandrotsahana ny vato.
Amin’ny mahafivoriambem-pokonolona azy dia fotoana fohy ihany no nanatanterahana ny fifidianana. Izay efa eo no manatanteraka azy. Io angaha no nahatonga ilay filazana hoe rehefa tsy mahatratra ny atasa-manilan’ny olona ampy taona ny olona nifidy dia tsy manankery ny fifidianana ka miantso fivoriambe manaraka indray ka any amin’ny fivoriambe fahatelo dia ekena hatrany ny latsabato na dia tsy mahatratra ny fetr’isa aza. Izay ny tamin’izany fotoana izany. Tsy fantatra moa hoe maharitra hafiriana ny fepotoam-piasan’ny sefom-pokotany fa ny fahalalako fotsiny no milaza azy ho telo taona, ny voafaritry ny lalàna mbola hofantariko aloha.
Fa ny tany Toamasina nampitain’ny namana iray no nahavariana ihany koa. Vao omaly manko no notanterahina ny tany. Ny taratasy fiantsoana no nentina nifidy. Talohan’izay dia nanontaniana hoe misy olona firy ny ampy taona ato…dia soratana iny. Dia tsy nisy lisistra araka izay nolazaiko teo ny fifidianana fa iny taratasy fiantsoana iny no karazana kara-pifidianana. Raha izany aho no nanao dikantsary iny taratasy iny izany dia nomeko ny namako dia afa-nifidy koa izy araka ny nambarany. Fa izany eo ihany fa dia nopetakana ranomainty sarobonoina ihany ny ankihibe rehefa vita ny fifidianana. Inona ary ity voraboraka hentitrentitra ity ? Dia ara-dalàna ve izany ity fifidianana ity ? Ahiako tsy mandalo Fitsarana avo momba ny Lalam-panorenana ihany koa manko ! Sa andeha atao hoe ara-panjakana na dia mety ho tsy ara-dalàna aza.